Akụkọ - Ọkwa nke ndị nrụpụta ihuenyo LCD iri kacha elu n'ụwa
Ịnye ọkwa nke ndị nrụpụta ihuenyo LCD iri kacha elu n'ụwa
Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ngosi nke mba m, usoro ụlọ ọrụ ngosi zuru ụwa ọnụ enweela nnukwu mgbanwe. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ LCD gbadoro anya na China, Japan na South Korea. Site na mwepụta nke ikike mmepụta ọhụrụ nke ndị na-emepụta panel nke ala, China China ga-abụ mpaghara mmepụta LCD kachasị ukwuu n'ụwa n'oge na-adịghị anya. Yabụ, kedu ndị nrụpụta ihuenyo LCD iri kacha elu n'ụwa yana kedu ka ha si ọkwa?
1. Ngosipụta LG (LG)
LG Ngosipụta (aha Chinese bụ LG Ngosipụta) bụ ugbu a ụwa No. 1 LCD panel emeputa, nke jikọrọ LG Group, isi na Seoul, South Korea, na R&D, mmepụta na trading ụlọ ọrụ na China, Japan, South Korea, na United States. Steeti na Europe.
Ndị ahịa LGDisplay gụnyere Apple, HP, DELL, SONY, Toshiba, PHILIPS, Lenovo, Acer, na ndị ọzọ na-emepụta ngwa eletrọnịkị nke ụwa. Apple's iPhone4, iPhone4S, iPhone5, iPad, iPad2, TheNewiPad na iPadmini kachasị ọhụrụ na-eji panel ngosi kristal mmiri mmiri LG Display.
Samsung Electronics bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe eletrọnịkị kacha na South Korea yana enyemaka kacha ukwuu nke Samsung Group. N'ọgwụgwụ 1990s, Samsung Eletrọnịkị 'mmepe teknụzụ nọọrọ onwe ya na ike imepụta ngwaahịa kwụụrụ onwe ya ka agbakwunyere. Atụmatụ mmepe ngwaahịa ya kwusiri ike na "teknụzụ na-edu ndú, na-eji teknụzụ kachasị elu na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ na ọkwa mmalite iji gboo mkpa ahịa dị elu." Na mgbakwunye na ụkpụrụ dabara adaba, ọ na-emesi ụkpụrụ kwekọrọ na "teknụzụ na-edu ndú, na-eji nkà na ụzụ kachasị elu na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ, ịmepụta ihe ọhụrụ na ahịa ahịa dị elu".
Innolux bụ ọkachamara TFT-LCD panel n'ichepụta ụlọ ọrụ tọrọ ntọala site Foxconn Technology Group na 2003. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na Shenzhen Longhua Foxconn Technology Park, na mbụ ego nke RMB 10 ijeri. Innolux nwere nyocha teknụzụ ngosipụta siri ike na otu mmepe, yana ike nrụpụta Foxconn siri ike, ma na-arụ ọrụ nke ọma uru nke njikọta kwụ ọtọ, nke ga-enye aka dị ukwuu n'ịkwalite ọkwa ụlọ ọrụ ngosipụta flat-panel nke ụwa.
Innolux na-eduzi mmepụta na ịre ahịa n'otu ụzọ nkwụsịtụ, ma na-enye ngwọta zuru oke maka ndị ahịa usoro otu. Innolux na-etinye nnukwu mkpa na nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ. A na-etinye ngwaahịa ndị kpakpando dị ka ekwentị mkpanaaka, DVD ndị a na-ebugharị ebugharị na ụgbọ ala, igwefoto dijitalụ, ihe egwuregwu egwuregwu, na ihuenyo PDA LCD n'ime mmepụta ọtụtụ, ha ejiriwo ngwa ngwa jide ahịa iji merie ohere ahịa. Enwetala ọtụtụ ikike ikike.
AU Optronics bụ nke a na-akpọbu Daqi Technology ma guzobe ya na August 1996. Na 2001, ọ jikọtara ya na Lianyou Optoelectronics ma gbanwee aha ya na AU Optronics. Na 2006, ọ nwetara Guanghui Electronics ọzọ. Mgbe njikọta ahụ gasịrị, AUO nwere ahịrị mmepụta zuru oke maka ọgbọ niile nke nnukwu, ọkara na obere LCD panel. AU Optronics bụkwa TFT-LCD mbụ nke ụwa, nrụpụta na ụlọ ọrụ R&D ka edepụtara n'ihu ọha na New York Stock Exchange (NYSE). AU Optronics butere ụzọ n'iwebata usoro njikwa ike ma bụrụ onye nrụpụta izizi n'ụwa niile iji nweta asambodo sistemu ike njikwa ike ISO50001 yana nyocha sistemu nyocha ngwaahịa ISO14045, wee họrọ ya dị ka Dow Jones Sustainability World na 2010/2011 na 2011/2012. Ndekọ mejupụtara ebuka setịpụrụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ.
Tọrọ ntọala na Eprel 1993, BOE bụ onye nrụpụta panel ngosi kacha ukwuu na China na onye na-eweta teknụzụ, ngwaahịa na ọrụ ịntanetị. Azụmahịa bụ isi gụnyere ngwaọrụ ngosi, sistemụ smart na ọrụ ahụike. A na-eji ngwaahịa ngosi eme ihe na ekwentị mkpanaaka, kọmputa mbadamba, kọmpụta akwụkwọ ndetu, ihe nleba anya, TV, ụgbọ ala, ngwaọrụ wearable na mpaghara ndị ọzọ; Sistemụ smart na-ewulite nyiwe IoT maka azụmaahịa ọhụrụ, ụgbọ njem, ego, agụmakwụkwọ, nka, ahụike na mpaghara ndị ọzọ, na-enye "ngwaahịa ngwaike + ngwa ngwanrọ + ngwa dị n'usoro" ngwọta zuru oke; azụmahịa ọrụ ahụike jikọtara ya na nkà mmụta ọgwụ na nkà na ụzụ ndụ iji zụlite ahụike mkpanaka, ọgwụ na-emezigharị na ọrụ ahụike O+O, na ijikọta akụrụngwa ogige ahụike.
Ka ọ dị ugbu a, mbupu nke BOE na ihuenyo LCD akwụkwọ ndetu, ihuenyo LCD dị larịị, ihuenyo LCD ekwentị mkpanaaka na mpaghara ndị ọzọ eruola nke mbụ n'ụwa. Site na ntinye nke ọma n'ime ahịrị ọkọnọ nke Apple, BOE ga-abụ ndị nrụpụta panel LCD atọ kachasị elu n'ụwa n'ọdịnihu dị nso.
6, Nkọ (SHARP)
A maara Sharp dị ka "Nna nke LCD panel." Kemgbe e hiwere ya na 1912, Sharp Corporation ewepụtala ihe mgbako mbụ na ngosipụta kristal nke ụwa, nke mepụtara pensụl dị ndụ, nke bụ mmalite aha ụlọ ọrụ ugbu a. Nye aka na ọganihu.
Ụlọ ọrụ ahụ na-achọ "ịmepụta ụlọ ọrụ pụrụ iche na ndụ narị afọ nke 21" site na "iche echiche" na-enweghị atụ na "ọganihu" nke gafere oge. Dị ka ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-arụ ọrụ vidiyo, ngwa ụlọ, ekwentị mkpanaaka na ngwaahịa ozi, ọ dị na isi obodo n'ofe mba ahụ. Tọlite ​​​​ebe azụmahịa ma wuo netwọk ọrụ azụmaahịa zuru oke iji gboo mkpa nke ndị na-azụ ahịa. Hon Hai enwetala Sharp.
7. Chunghwa Foto Tubes (CPT)
Tọrọ ntọala na 1971, Chunghwa Foto Tubes agba mbọ na mmepe nke teknụzụ ngosi. Site n'ichepụta ọhụụ na nyocha na mmepe na-aga n'ihu, ọ webatara ngwaahịa ọhụrụ dị elu iji gboo mkpa mmadụ maka ịnụ ụtọ anya.
Chunghwa Picture Tubes nwere ahụmahụ bara ụba na R&D na mmepụta ngwaahịa vidiyo dị ukwuu, yana teknụzụ bara uru dị ka akụkụ nlele sara mbara, nzaghachi ngwa ngwa na saturation agba dị elu, na-ebupụta ngwaahịa ọhụrụ mgbe niile, na-eme ka ogo ngwaahịa na ụkpụrụ ọrụ dịkwuo mma, na-arụ ọrụ “mmepụta ihe ọhụrụ. , ịchụso izu okè, na ịdị n'otu" The azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "mmekọrịta" na-agba mbọ na nnyocha na mmepe nke a zuru nso nke ngwaahịa site na obere ka nnukwu size, na-arụsi ọrụ ike na-agbalịsi ike ọhụrụ na gburugburu optoelectronic technology, na-aghọ onye ndú na. ụlọ ọrụ vidiyo.
8. Otu Toshiba (TOSHIBA)
Toshiba bụ a maara nke ọma multinational Enterprise otu na a akụkọ ihe mere eme nke 130 afọ, na a dịgasị iche iche nke azụmahịa, metụtara na-elekọta mmadụ akụrụngwa ewu, ezinụlọ ngwa, digital ngwaahịa, electronic components na ndị ọzọ azụmahịa ubi, ekpuchi fọrọ nke nta akụkụ nile nke mmepụta na ndụ. Toshiba nwere ụlọ ọrụ R&D kachasị na Japan. Site na ihe ọhụrụ na mmepe na-adịghị akwụsị akwụsị, Toshiba na-abụkarị ụzọ mbụ nke sayensị na teknụzụ ụwa. Site na ịmalite igwe ịsa ahụ mbụ nke Japan, friji na ngwa ụlọ ndị ọzọ, ruo na ịmepụta kọmpụta akwụkwọ ndetu mbụ nke ụwa, ebe nchekwa flash mbụ 16MB, nke kacha nta n'ụwa 0.85-inch HDD; ịmepụta teknụzụ HDDVD dị elu; nyocha na imepụta ihe ngosi SED ọhụrụ, Toshiba ekepụtala ọtụtụ “mbụ ụwa” wee nye aka n'ịgbanwe ndụ ndị mmadụ site na imepụta teknụzụ na-aga n'ihu. N'oge na-adịbeghị anya, Toshiba ji nwayọọ nwayọọ na-apụ na ngwa ụlọ na ahịa ngwaahịa eletrọnịkị ma na-etolite n'ime ụlọ ọrụ nwere ọdịnaya teknụzụ dị elu.
Tianma Microelectronics e guzobere na 1983 ma depụta ya na Shenzhen Stock Exchange na 1995. Ọ bụ ụlọ ọrụ nkà na ụzụ ọhụrụ nke na-enye ngwọta ngosi na nkwado ọrụ ngwa ngwa maka ndị ahịa ụwa.
Ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-achịkwa teknụzụ ndị na-eduga gụnyere LTPS-TFT, AMOLED, ngosi mgbanwe, Oxide-TFT, ihe ngosi 3D, ihe ngosi transperent, na IN-CELL / ON-CELL jikọtara mmetụ aka. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ụlọ nyocha injinia nke mba maka isi ihe na teknụzụ TFT-LCD, ụlọ ọrụ teknụzụ nke mba, ụlọ ọrụ mkpanaka post-doctoral, ma na-arụ ọtụtụ ọrụ pụrụ iche nke mba dị ka National Development na Reform Commission. , Ministry of Science and Technology, na Ministry of Industry and Information Technology. Teknụzụ siri ike nke ụlọ ọrụ ahụ na ikike nyocha sayensị aghọwo isi nkuku nke mmepe ụlọ ọrụ na-adigide.
10. Ụlọ ọrụ Kyocera (Kyocera)
E hiwere ụlọ ọrụ Kyocera na 1959 dị ka onye na-emepụta seramiki teknụzụ. Teknụzụ ceramik na-ezo aka n'usoro ihe dị elu nwere ihe anụ ahụ, kemịkalụ na eletrọnịkị pụrụ iche. Taa, ọtụtụ n'ime ngwaahịa Kyocera metụtara telekomunikasonu, gụnyere semiconductor components, redio ugboro na ngwa ndakwa nri ngwugwu, passive electronic components, wireless mobile phones and network equipment, crystal oscillators and connectors, and optoelectronic ngwaahịa eji na optoelectronic nkwurịta okwu netwọk.